Homeसमाचारधादिङको बेनीघाट झोलुङ्गे पुलबाट एक दम्पतीले दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफाले !
January 16, 2020 Spnews समाचार Comments Off on धादिङको बेनीघाट झोलुङ्गे पुलबाट एक दम्पतीले दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफाले !
आज (बिहीबार) साँझ ६ बजेतिर धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित बेनीघाटमा रहेको त्रिशूली नदीको झोलुङ्गे पुलबाट एक दम्पती दुई नाबालक छोरासहित हाम फालेका छन् । काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित थानकोट घर भएका विनय लामिछाने र उनकी श्रीमती दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफालेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार त्रिशूली पुलबाट नदीमा हाम फालेका उनीहरुमध्ये बिनयलाई जिवितै उद्दार गर्न सकिए पनि श्रीमतीको भने मृ’त्यु भएको छ । यस्तै दुई नाकाबलक छोराहरु वेपत्ता छन् ।
वेपत्ता हुने बालकहरु २ वर्ष र ६ महिनाको भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु किन एकसाथ नदीबाट हामफाले भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन । प्रहरीले बेपत्ता भएकाहरुको खोजीकार्य तीव्र बनाउनुका साथै घटनाबारे अनुसन्धान थालेको छ।
बिहीबारदेखि देशभर हिउँदे वर्षा, आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने